Nhau - Iwe unonyatso ziva Dual chiito mota kupolisha
1. Chii chinonzi Dual Action Car Polisher?
Dual-chiito polishers inozivikanwa nekufamba kwemusoro. Inotenderera pane yepakati chokurukisa, uye chokurukisa ichi chinotenderera chakakomberedza eccentric. Chirevo chakanakira chiito chekukororodza inzira yepasi. Pasi pacharo rinotenderera uye rinotendererawo zuva. Iyo Dual Action Polisher inosuka, kupukuta, uye waxes nekufamba senge kweruoko rwemunhu-chete pakumhanya-kwepamusoro kwevanhu! Mhedzisiro muchina wakanyatso gadzikana, usingaite "kutiza" kubva kune anoshanda. Iko kutsetseka, ruoko-senge chiito chinodzivirira pakukanganisa kwepasirese.
2.Why sarudza Dual Action Mota Polishers?
Dual-chiito polishers ichavandudza iwo maratidziro uye kubwinya kwepairi mota pamwe pasina njodzi. Ivo ndivo mushandisi-anoshamwaridzika sarudzo yevanotanga uye nyanzvi, uye vanogara vachiburitsa mhedzisiro yakanaka. Vanogona kukuunzira mafaro kana uchidudzira, uye nekukubatsira iwe kuchengetedza nguva nemari. D / A Polisher muchina unoshanda zvakasiyana. Inogona kushandiswa pakuchenesa, kupora, nekuisa waxes, yekupedzisira kupedzisa neimwe kumhanya.
3.Dual Action Car Polishers anoshanda sei?
Dual Action Polisher inotenderera iyo pad yakatenderedza yepakati spindle apo iyo pad inosununguka zvakasununguka pane yayo yega axis.
A counterweight kune yakatarisana nedivi repakati chokurukisa inoderedza vibration kuti ishande zvakanaka. Mushini wemusoro wechiito unonzi orbital unodzivirira kugadzirwa kwe holograms (symmetrical buffing mamaki), pendi kutsva, uye mamwe marudzi ekukuvara kwepende anowanzo sanganisirwa neyekumhanya-mhanya rotary polishers uye buffing michina. Dual Action Polisher inobvisa mukana wependi kukuvara. Ivo vane hushamwari kwazvo kune vashandisi.
Post nguva: Sep-16-2020